Mayelana Nathi | Inkampani Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Umgomo wethu: Masijabulele ukukhanya kwelanga.
Umbono wethu: Lapho kunokukhanya kwelanga, kuneGroupeve.
Amagugu ethu: Impumelelo yamakhasimende, ukwethembeka nokwethembeka; Vula emisha futhi ulwele ukwenza kahle.
Ukugeza elangeni kusenza sifudumale futhi sibe nempilo.
Sihlezi ehhovisi elivulekile futhi sizwa ukukhanya kwelanga okusha nokugqamile kudlula engilazini, siqala usuku olumatasa noluthelayo. Asikho isidingo sokukhathazeka ukushisa nokulimala kwelanga, ngoba indwangu ye-roller ikhiqizwa yi-Groupeve Company, engakwazi ukuvimba kuphela ukukhanya okunamandla nemisebe ye-ultraviolet kodwa futhi ingadlulisela ukukhanya, i-ventilate, i-heat-insulate, igcine isikhala futhi ihlanze kalula, yingakho singajabulela ukubuka okungavimbekile kanye nokukhanya kwelanga okuhle njalo ehhovisi.
Ngemva kweMpi Yezwe II, ukufudumeza, ukungena komoya, amalambu e-fluorescent, uphahla oluhlanganisiwe kwaduma ezakhiweni, kodwa lezi zakhiwo zathinta ukukhanya kwemvelo, ngakho izakhiwo zamahhovisi ezinezindonga zeglasi zavela ngawo-1950. Banikeza umbono obanzi ngaphandle kokuphazamiseka, okwakhuthaza ukuthuthukiswa kwamahhovisi okwakheka kwezwe ngeminyaka yawo-1960. Ngo-1958, uMies noJohnson baklama iSakhiwo seSeagram esinezitezi ezingu-38 saseNew York esinezindonga zamakhethini ezingilazi, kusukela ngaleso sikhathi, lezi zakhiwo ezinezindonga zengilazi bezilokhu zikhuphuka emhlabeni wonke. Ama-Roller Blinds angandisa ukukhanya okusebenzayo futhi avimbe imisebe ye-ultraviolet abe okugxilwe kuwo ukunakwa.
UMnu HEHJ weGroupeve useshe futhi wahlola zonke izinhlobo zemikhiqizo ye-sunshade emhlabeni wonke, ekugcineni wathola le ndwangu ehlangabezana nazo zonke izindinganiso zakhe eziqinile. Ngo-2001, i-Groupeve yangenisa inqwaba yemishini ye-Teslin, ubuchwepheshe be-Telewala obuyingqayizivele benza umkhiqizo ube nezinzuzo eziningi, ukubala ezimbalwa, impilo ende yesevisi, ukuhlanzeka okulula, ukudluliswa okuphezulu kanye nohlu olubanzi lwezinketho zobubanzi. Ikhethini noma abakhiqizi be-roller blinds bangakhetha ububanzi kusuka ku-1.83m / 2m / 2.5m / 3m, okunganciphisa imfucuza futhi kulondoloze izindleko. Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kwenza imikhiqizo ye-Groeveve ifinyelele izinga lokusebenzisa elingu-98%, igwema udoti wendwangu ngenxa yokukhubazeka.
Ekuqaleni, indwangu ihlanganiswe ne-fiberglass ne-PVC, ngemva kweminyaka emithathu yocwaningo; I-Groupeve isebenzise i-polyester esikhundleni se-fiber yengilazi ukuze ithole umkhiqizo omusha, onokusebenza okungcono kanye nezindleko eziphansi. Yaqashelwa ngokushesha yimakethe yomhlaba wonke.
Njengamanje, i-Groupeve isithuthukise izinhlobo ezingaphezu kuka-2000 zezindwangu zama-roller blinds, ezithunyelwa emazweni angama-82 emhlabeni jikelele. Izakhiwo eziningi zamahhovisi ezingilazi zikhethe imikhiqizo ye-Groeve.
Thanda futhi ujabulele ukukhanya kwelanga okuvela emikhiqizweni ye-Groeve.